२०७७ असार ३१ बुधबार १८:४८:००
पाकिस्तानले त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई बुधवार दुईवटा आधुनिक एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको छ । पाकिस्तानी राजदूत डा. मजहर जाभेदले अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. रोहितकुमार पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले पाकिस्तान सरकारलाई सहयोगका लागि आभार व्यक्त गरेका छन् । यसबाट काठमाडौं र वरिपरिका बिरामीलाई एन्बुलेन्स सेवामा थप सहजीकरण भएको उनको भनाइ थियो । यो सहयोग दुई देशका जनताको सुमधुर सम्बन्धको प्रतीक रहेको पनि पोखरेलको भनाइ थियो ।
पाकिस्तानले विगतमा पनि अस्पताललाई एम्बुलेन्स सहयोग गरेको थियो । पाकिस्तानी राजदूत जाभेदले पाकिस्तान र नेपालका मेडिकल संस्थानहरूको क्षमता उपयोग हुन बाँकी रहेको र आपसमा सहकार्य हुनुपर्ने बताए । उनले दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको र थप सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
#शिक्षण अस्पताल # पाकिस्तान # एम्बुलेन्स उपहार
भाटभटेनीका अध्यक्षले ११ करोड लागतमा शिक्षण अस्पताललाई भवन बनाइदिने